Nhau - Western Minmetals (SC) Corporation
Global Semiconductor Kutengesa Kuwedzera 1.9% Mwedzi-kusvika-Mwedzi muna Kubvumbi
Global Semiconductor Kutengesa Kuwedzera 1.9% Mwedzi-kusvika-Mwedzi muna Kubvumbi; Mutengo Wegore Negore Unofungidzirwa Kuwedzera 19.7% muna 2021, 8.8% muna 2022
WASHINGTON - Chikumi 9, 2021 - Semiconductor Industry Association (SIA) nhasi yazivisa kutengeswa kwepasirese kwevadzidzi vema semiconductors vaive madhora zviuru makumi mana nemazana masere makumi masere nemana muna Kubvumbi 2021, kuwedzera kwe1.9% kubva muna Kurume 2021 huwandu hwemadhora zviuru makumi mana nezviviri uye 21.7% kudarika muna Kubvumbi 2020. $ 34.4 bhiriyoni. Kutengesa kwemwedzi nemwedzi kunounganidzwa nesangano reWorld Semiconductor Trade Statistics (WSTS) uye inomiririra avhareji yemwedzi mitatu inofamba. Pamusoro pezvo, ichangoburitswa WSTS indasitiri yekufungidzira mapurojekiti epagore kutengeswa kwepasi rose kuchawedzera 19.7% muna 2021 uye 8.8% muna 2022. SIA inomiririra 98% yeUS semiconductor indasitiri nemari uye dzinenge maviri-matatu ezvitatu asiri eUS chip mafemu.
"Kudiwa kwepasirese kwema semiconductors kwakaramba kwakakwira muna Kubvumbi, sezvakaratidzwa nekukwira kwekutengesa munzvimbo dzakasiyana siyana dzechip uye mumisika yega yega yepasi," akadaro John Neuffer, purezidhendi weSIA uye CEO. "Musika wepasi rose chip unofungidzirwa kuti uchakura zvakanyanya muna 2021 na2022 sezvo semiconductors vachiwedzera kubatanidzwa mukuchinja-shanduka kwetekinoroji yanhasi neramangwana. ”
Nharaunda, kutengesa kwemwedzi kusvika kumwedzi kwakawedzera pamisika mikuru yenharaunda: maAmerican (3.3%), Japan (2.6%), China (2.3%), Europe (1.6%), uye Asia Pacific / Zvese zvimwe (0.5%) . Pagore-kune-gore hwaro, kutengesa kwakawedzera muChina (25.7%), Asia Pacific / Zvese Zvimwe (24.3%), Europe (20.1%), Japan (17.6%), uye maAmerican (14.3%).
Pamusoro pezvo, SIA nhasi yatsigira WSTS Chitubu 2021 yepasi rese semiconductor yekutengesa fungidziro, iyo inojekesa kutengeswa kwepasirese kwepasirese kuchave $ 527.2 bhiriyoni muna 2021, 19.7% kuwedzera kubva muna 2020 kutengesa kwese kwe $ 440.4 bhiriyoni. Zvirongwa zveWSTS gore-gore-gore zvinowedzera muAsia Pacific (23.5%), Europe (21.1%), Japan (12.7%), uye maAmerica (11.1%). Muna 2022, musika wepasi rose unofungidzirwa kutumira zvishoma nezvishoma - asi zvakadaro zvakakura - kukura kwe8.8%. WSTS inoratidzira yayo yepagore-gore indasitiri inofungidzira nekuunganidza zvinongedzo kubva kuboka rakakura remakambani epasirese semiconductor ayo anopa zviratidziro uye zvinoenderana nenguva zvema semiconductor maitiro.
Kune yakazara pamwedzi semiconductor yekutengesa data uye yakajeka WSTS fungidziro, funga kutenga iyo WSTS Kunyorera Package. Kuti uwane ruzivo rwakadzama nezvenhoroondo nezve yepasirese semiconductor indasitiri uye musika, funga kuodha iyo SIA Databook.
Kuti udzidze zvakawanda nezve yepasirose semiconductor yekupa cheni, dhawunirodha iyo nyowani SIA / Boston Kutaurirana Boka Rondedzero: Kusimbisa iyo Global Semiconductor Supply Chain mune isina Kujeka Era.
copyright @ SIA (Semiconductor Indasitiri Sangano)
Post nguva: 28-06-21